Apple Watch Series 7 dia manolotra famindrana angona tsy misy tariby amin'ny 60,5 GHz saingy tsy misokatra | Vaovao IPhone
Apple Watch Series 7 dia manolotra famindrana data tsy misy tariby 60,5 GHz saingy tsy misokatra
Ity dia iray amin'ireo fiasa izay ampiana ao amin'ny Apple Watch Series 7 ary tafaporitsaka tao anaty antontan-taratasy FCC. Ny vaovao avy amin'ny tanan'i MacRumors manondro fa ny Series 7 dia manolotra safidy famindrana data 60,5 GHz. Ity safidy ity dia tsy misokatra ho an'ny mpampiasa rehetra. fampiasana manokana ny mpiasa Apple.
Ity fifandraisana ity dia manolotra transmitter 60,5 GHz mila "dock serial serial" patantin'i Apple miaraka amina fifandraisana USB C izay ny mpiasa ao amin'ny Apple ihany no toa tsy mila mandefa data amin'ny smartwatch. Amin'io lafiny io dia tsy dia misy antsipirihany loatra momba ny fiasan'ity fampitana data ity na dia marina aza fa tsy ho azontsika ampiasaina koa izy ireo.
Izy io dia fototra iray mamela ny famindrana angona avy amin'ny Apple Watch Series 7
Seho filtration fototra miaraka amina laharana A2687 ary araka ny efa nolazainay tany am-piandohana dia miasa amin'ny seranana USB-C izy. Ny fifandraisana misy eo amin'ny fotony sy ny famantaranandro dia avy amin'ny andriamby toy ny toby famahanana ho an'ny Apple Watch.
Ny EUT dia misy fitaovana tanan-tànana Apple Watch misy modely fandefasana data 60,5 GHz tsy misy fahazoan-dàlana. Toerana tsy misy tariby serial tsy miankina manana modely 60,5 GHz mifanaraka aminy no takiana mba ahafahan'ny streaming ao amin'ny Apple Watch. Fitaovana fampifanarahana andriamby no manidy ny Apple Watch eo an-tampon'ilay toerana tsy misy tariby serial, mamela ny fifandraisana eo amin'ny fototra sy ny Apple Watch. Ny base serial tsy misy tariby dia ampiasain'ny seranan-tsambo USB-C.
Navoaka sy navoakan'ny media ny antontan-taratasy tamin'ny faran'ny volana aogositra sys mpandalina Barclays Blayne Curtis sy Tom O'Malley, dia ireo izay namoaka ny angona. Amin'ity fototra ity, araka ny nohazavaina teo afovoany, ny fifandraisana dia mamela ny data halefa hatramin'ny 480 Mbps, izay mitovy amin'ny hafainganan'ny USB 2.0. Mety te hiditra amin'ny fampahalalana momba ny fitaovana i Apple nefa tsy mampiasa ny seranana izay hita ao anaty loaka ho an'ny tadiny, miaraka amin'izany dia ho mora kokoa ny miditra amin'ny famantaranandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple Watch Series 7 dia manolotra famindrana data tsy misy tariby 60,5 GHz saingy tsy misokatra
Apple dia namoaka ny tranofiara voalohany ho an'ny andiam-panafihana